Cilmiga Bulshada - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Waaxda Cilmiga Bulshada waxay bixisaa koorsooyin kala duwan si ay ula kulanto dhibcaha 3.5 semester ee lagama maarmaanka u ah qalinjabinta. Waxaan sidoo kale bixinnaa xulashooyin si aad uhesho xiisahaaga mowduucyo badan iyo arrimo maanta adduunka la xiriira. Koorsooyinka waxaa ka mid ah juqraafiga aadanaha, cilmiga bulshada Mareykanka, dhaqaalaha, taariikhda Mareykanka, taariikhda adduunka, taariikhda Yurub, siyaasadda, cilmu-nafsiga iyo cilmiga bulshada. Ka dooro heerar kala duwan iyo qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan Meelaynta Horukacsan, Caalamiga ah ee Baccalaureate, Isbuucaan Isbaanishka, Bilowga Shiinaha, VANTAGE, iyo khadka tooska ah. Wax ka baro oo ka fahanto adduunka kugu xeeran koorsooyin kuu diyaarinaya fikirka muhiimka ah, doodaha, iyo falanqaynta xirfadaha lagama maarmaanka u ah waxbarashada dugsiga sare iyo wixii ka dambeeya.
Koorsooyinka Cilmiga Bulshada (PDF)
Koorsada Bilowga Shiinaha
Koorsada Tooska ah ee Tonka
Xagaaga Tonka Online
Koorsada Barashada Safarka
Daraasadaha Mareykanka 10 Maamuus
Koorso: # 1022 - Ingiriisi, S1
Koorso: # 1024 - Ingiriisi, S2
Koorso: # 2008 - Daraasaadka Bulshada, S1
Koorso: # 2010 - Cilmiga Bulshada, S2
* Ardaydu waa inay iska diiwaangeliyaan dhammaan afarta koorso.
Fasalada (yada) la bixiyo: 10
Heerarka: .5 (semesterkiiba)
Shuruudaha looga baahan yahay: Ingiriis kasta oo 9 Koorso ah oo isqorista isku midka ah ee Daraasaadka Bulshada 2012 & 2013
Koorsadan maadooyinka heerka-sharafeedku waxay kulmayaan laba xilli oo fasal ah waxayna buuxinayaan shuruudaha labada cilmiga bulshada ee fasalka 10aad iyo Ingiriisiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Daraasaadka Mareykanka 10 Maamuus
Luqadda iyo Dhaqanka Shiinaha ee Shiinaha (Bilowga Shiinaha)
Koorso: # IM104, S1
Koorso: # IM106, S2
Fasalada (yada) la bixiyay: 9-10
Heerarka: 1.0 (koorso sanad-dheer ah)
Shuruudaha looga baahan yahay: Isqorista K-8/9 ee Bilowga Shiinaha
Koorsadan farshaxanka luuqadda Shiinaha ah waxay sii kobcineysaa kalsoonida ardayda ee hadalka, akhriska, qorista, dhageysiga iyo hadalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Luqadda Shiinaha iyo Dhaqanka (Imtixaanka Shiinaha)
AP Isbarbardhiga Dowlada
Koorso: # AP216
Xulashada khadka tooska ah: T2108, Tonka Online
Heerarka: .5 (koorsada semester)
Shuruudaha: Ma jiro
Koorsadan oo heer jaamacadeed ah ayaa lagu falanqeynayaa nidaamyada siyaasadeed ee Boqortooyada Ingiriiska, Ruushka, Shiinaha, Mexico, Nigeria iyo Iran. Markay baaraan lixdaan dal, ardaydu waxay horumarin doonaan fahamka fikradaha iyo mowduucyada siyaasadeed.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Comparative Government
AP Taariikhda Yurub
Koorso: # AP208, S1
Koorso: # AP210, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T2112F, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah : # T2114W, Tonka Online
Heerarka: 5 (sanadkiiba)
* Khadka tooska ah, buuxi qeybta 1 kahor qeybta 2.
Shuruudaha: Taariikhda Mareykanka ee casriga ah; AP Taariikhda Mareykanka; Daraasadaha Mareykanka 10 Maamuus (B ama ka fiican)
Fasalkani wuxuu sahmin doonaa isbeddellada waaweyn iyo dhacdooyinka taariikhda Yurub laga soo bilaabo Renaissance (1350) ilaa maanta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Taariikhda Yurub
Koorso: # AP200, S1
Koorso: # AP202, S2
Shuruudaha: B + ama ka fiican fasalka 8aad ee Ingiriisiga iyo Cilmiga Bulshada
Juquraafiga Aadamigu waa daraasadda aadamaha iyo sida ay ula falgalaan hareerahooda. Xoog saarida fikradaha goobta iyo falanqaynta muuqaalka si loo baaro ururka bulshada ee bini'aadamka iyo cawaaqib xumada deegaanka ayaa ah fikradaha hagaya koorsadan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Human Geography
Koorso: # AP218
Xulashada khadka tooska ah: # T2106W, Tonka Online
* Xulo ereyga S = Xagaaga, W = jiilaalka
Ardaydu waxay baran doonaan kobaca dhaqaalaha, sicir bararka, shaqo la'aanta, ganacsiga dibada, lacagta, iyo siyaasadaha maaliyadeed ee heerka koowaad ee kuleejka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Macroeconomics
Cilmi nafsiga AP
Koorso: # AP220
Xulashada khadka tooska ah: # T2100, Tonka Online
Koorsadan sidoo kale waxaa loo qaadan karaa iyada oo qayb ka ah VANTAGE # V200
Cilmu-nafsiga waa barashada hab-dhaqanka iyo habka maskaxda. Fasalkan AP wuxuu hordhac u yahay cilmu-nafsiga heer kuliyadeed iyadoo la adeegsanayo qoraal kuleej ah, "qaab iskuul" xawaare iyo cimilada fasalka, iyo imtixaanno heer kulleejo ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Psychology
AP Luqadda Isbaanishka iyo Dhaqanka (Quusin)
Koorso: # IM204, S1
Koorso: # IM206, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Isqorista K-8 ee Imbarashada Isbaanishka
Koorsadan fanka luuqada Isbaanishka waxay sii kobcineysaa kalsoonida ardayda xagga hadalka, aqrinta, qorista, dhageysiga iyo hadalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Luqadda Isbaanishka iyo Dhaqanka (Immersion)
AP Taariikhda Mareykanka
Koorso: # AP204, S1
Koorso: # AP206, S2
Shuruudaha: Madaniga iyo Juqraafiga Aadanaha; Juqraafiga AP
Ardaydu waxay dhammaystiraan akhriska, qorista, iyo falanqaynta heerka sare ee mawduucyada taariikhda meelaynta Akhriska ee Maraykanka waxay ka yimaadaan qoraal heer jaamacadeed ah, ardayduna waxay la shaqeeyaan kuwa kale si ay xirfad dheeraad ah ugu yeeshaan qorista qormooyinka taariikheed.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Mareykanka Taariikhda
AP Dowladda Mareykanka iyo Siyaasadda
Koorso: # AP214
Xulashada khadka tooska ah : # T2110, Tonka Online
Akhrinta, cilmi baarista, doodaha, khibradaha goobta, iyo bandhigyada warbaahinta, ardaydu waxay baran doonaan fikradaha siyaasadeed, xisbiyada, ololayaasha, doorashooyinka, kooxaha danaha, xafiisyada, xorriyadaha bulshada, doorka warbaahinta, garsoorka, sharci dejinta iyo howlaha fulinta, iyo abuuritaanka ee siyaasada guud.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Dowladda Mareykanka iyo Siyaasadda
Koorso: # AP224, S1
Koorso: # AP225, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T2102F, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah : # T2104W, qeybta 2, Tonka Online
Fasalada La Bixiyay: 11-12
Shuruudaha: Taariikhda Mareykanka ee casriga ah; AP Taariikhda Mareykanka; Daraasadaha Mareykanka 10 Maamuus (darajada B ama ka wanaagsan)
Ardaydu waxay dhammaystiraan akhriska, qorista, iyo falanqaynta heerka sare ee mowduucyada Taariikhda Adduunka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP World History
Xirfadaha iyo Xirfadaha (Immersion Shiinaha)
Koorso: # IM136
Fasalada (yada) la bixiyay: 9-12
Shuruudaha looga baahan yahay: Isqorista K-8 ee Bilowga Shiinaha
Koorsadani waxay sii horumarin doontaa oo ay sare u qaadi doontaa xirfadaha ardayga ee ku hadalka, aqrinta, qorista iyo dhageysiga Shiinaha iyadoo loo eegayo qaabka goobta shaqada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xirfadaha iyo Xirfadaha (Immersion-ka Shiinaha)
Xirfadaha iyo Xirfadaha (Isbayn Isbaanish)
Koorso: # IM236
Koorsadani waxay sii horumarin doontaa oo ay sare u qaadi doontaa xirfadaha ardayga ee ku hadalka, akhriska, qorista iyo dhageysiga Isbaanishka iyadoo lagu dhexjiro goobta shaqada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xirfadaha iyo Xirfadaha (Isbayn Isbaanish)
Filimka Shiinaha iyo Dhaqanka
Koorso: # IM140
Fasalada La Bixiyay: 9-12
Heerarka: .5 (koorso hal-semester ah)
Koorsadani waxay fursad u siin doontaa ardayda inay sii horumariyaan xirfadahooda luqadeed iyagoo baranaya, daawanaya iyo falanqeynaya filimada ka socda adduunka ku hadla Shiinaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Filimka Shiinaha iyo Dhaqanka
Filimka Shiinaha iyo Dhaqanka (Tonka Online)
Koorso: # T5199
Fasalka (s) La Siiyay: 9-12
Koorsadan Tonka Online waxay ka caawin doontaa ardayda inay sii wataan xirfadahooda luqadeed iyagoo baranaya, daawanaya iyo falanqeynaya filimada ka socda adduunka ku hadla Shiinaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Filimka iyo Dhaqanka Shiinaha (Tonka Online)
Bini'aadamka Shiinaha ayaa Maamuusay (Quusitaanka Shiinaha)
Koorso: # IM112, S1
Koorso: # IM114, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Luuqadda Shiinaha iyo Dhaqanka AP (Immersion)
Sharafta Aadamiga Sharafta leh waa daraasad dhammaystiran oo xeel dheer oo ku saabsan suugaanta Shiinaha, farshaxanka, taariikhda, afafka, iyo dhaqanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xushmada Aadanaha Shiinaha (Immersion-ka Shiinaha)
Madaniga iyo Juqraafiga Aadanaha
Koorso: # 2000, S1
Koorso: # 2002, S2
Fasalada (yada) la bixiyo: 9
Koorsadan waxaa ka mid ah aasaaska iyo mabaadi'da dowladda Mareykanka iyo muwaadinnimada.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Madaniga iyo Juqraafiga Aadanaha
Madaniga & Juqraafiga Aadanaha (Quusitaanka Shiinaha)
Koorso: # IM108, S1 Shiine
Koorso: # IM110, S2 Shiine ah
Lagu qabtay Shiinaha, koorsadan laba-semesterka ah waxaa ka mid ah barashada aasaaska iyo mabaadi'da dowladda Mareykanka iyo jinsiyadda.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Madaniga & Juqraafiga Aadanaha (Immersion-ka Shiinaha)
Madaniga & Juqraafiga Aadanaha (Isbayn Isbaanish)
Koorso: # IM208, S1 Isbaanish
Koorso: # IM210, S2 Isbaanish
Koorsadan Bilowga ah waxaa ka mid ah barashada aasaaska iyo mabaadi'da dowladda Mareykanka iyo jinsiyadda.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Madaniga & Juqraafiga Aadanaha (Isbayn Isbaanish)
Farshaxanka casriga ah iyo Dhaqanka, Koonfurta Ameerika
Koorso: # IM242
Shuruudaha looga baahan yahay : Luuqadda Isbaanishka iyo Dhaqanka ee AP (Immersion)
Koorsadani waxay sahamineysaa dhaqanka casriga casriga ah ee waddamada Koonfurta Ameerika, iyadoo diiradda la saarayo: xayeysiinta, muusikada, gabayada, sheekooyinka, dhaqamada hoose iyo isbeddellada iyo dhacdooyinka hadda ka jira bulshada.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Fanka iyo Dhaqanka casriga ah, Koonfurta Ameerika
Fanka iyo Dhaqanka casriga ah; Spain, Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka - CUSUB 2021!
Koorso: # IM241
Shuruudaha looga baahan yahay : Luuqadda Isbaanishka iyo Dhaqanka AP (Immersion)
Koorsadani waxay sahamineysaa dhaqanka casriga casriga ah ee Spain, Wadamada Bartamaha Ameerika & Kariibiyaanka, iyadoo diiradda la saarayo: xayeysiinta, muusikada, gabayada, sheekooyinka, dhaqamada hoose iyo dhacdooyinka hadda socda.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Fanka iyo Dhaqanka casriga ah; Spain, Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka - CUSUB 2021!
Taariikhda Mareykanka ee casriga ah
Koorso: # 2004, S1
Koorso: # 2006, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T2004 *, Tonka Online
* Xulo ereyga S = xagaaga, F = dayrta
Xulashada khadka tooska ah : # T2006 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, W = jiilaal
Shuruudaha: Juqraafiga Aadanaha iyo Madaniga; Juqraafiga AP
Koorsadan laba-semesterka ah waxay bixin doontaa daraasad mawduuc leh oo ku saabsan dadka, dhacdooyinka iyo horumarka qaran ee Taariikhda Mareykanka iyadoo diirada la saarayo Qarnigii 20-aad illaa iyo hadda. Koorsadani waxay ardayda u diyaarin doontaa fahamka doorka Mareykanka ee adduunka WWI kadib.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Taariikhda casriga ah ee Mareykanka
Wadahadal iyo halabuur (Bilowga Shiinaha)
Koorso: # IM130, S1
Koorso: # IM131, S2
Shuruudaha: Luuqadda Shiinaha iyo Dhaqanka AP
Koorsadan Farshaxanka Luqadda Shiinaha ee Shiinaha ayaa diiradda saari doonta hagaajinta xirfadaha hadalka iyo qorista ardayda iyo fahamka dhageysiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Wadahadalka iyo Curinta (Quusin Shiine)
Wadahadal iyo Qaab dhismeed (Isbayn Isbaanish)
Koorso: # IM230, S1
Koorso: # IM231, S2
Shuruudaha: AP Luuqada Isbaanishka iyo Dhaqanka
Koorsadan Farshaxanka Luqadda Isbaanishka ah waxay diiradda saari doontaa hagaajinta xirfadaha hadalka iyo qorista ardayda iyo fahamka dhageysiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Wadahadalka iyo Dhismaha (Isbayn Isbaanish)
Daraasaadka Caalamiga iyo Dhaqaalaha
Koorso: # 2016
Xulashada khadka tooska ah: T2016
Koorsadan sidoo kale waxaa loo qaadan karaa iyada oo qayb ka ah VANTAGE # V300 (mid dooro).
Koorsadani waxay daboolaysaa fikradaha dhaqaalaha iyada oo loo marayo qaddiyadda arrimaha caalamiga ah sida: caalamiyeynta, kor u kaca Shiinaha, iyo arrimo badan oo ku lug leh Bariga Dhexe.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Daraasaadka Caalamiga iyo Dhaqaalaha
Bani'aadamnimada Isbaanishka ee Sharafta leh (Isbayn Isbaanish)
Koorso: # IM212, S1
Koorso: # IM214, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Luuqadda Isbaanishka iyo Dhaqanka ee AP (Immersion)
Koorsadani waa daraasad guud oo guud oo ku saabsan suugaanta Isbaanishka, farshaxanka, taariikhda, afafka iyo dhaqanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hispanic Humanities Honors (Isbayn Isbaanish)
IB Dhaqaalaha SL
Koorso: # IB212, S1
Koorso: # IB214, S2
Shahaadooyinka (yada) la bixiyo: 11-12
Heerarka: 1 (koorso sanad-dheer ah)
Koorsadan oo hal sano ah ayaa kahadleysa dhaqaalaha-yar iyo dhaqaalaha-yar iyo waliba horumarka iyo dhaqaalaha caalamiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan dhaqaalaha IB
IB Global Politics SL (Isbayntii Isbaanishka)
Barashada cilmiga bulshada ee sanadka oo dhan ah oo la doorto taas oo lagu dabaqi karo fasalka 12aad ee loo baahan yahay buundada barashada bulshada
Koorso: # IM264, S1
Koorso: # IM265, S2
Shuruudaha: Isqorista K-10/11 ee Isbaynka Isbaanishka
Koorsadani waxay ujeedadeedu tahay horumarinta maskaxda adduunka iyo ka warqabka aragtiyada kala duwan iyadoo la baranayo arrimaha siyaasadeed ee casriga ah ee adduunka
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Global Politics SL (Isbaanishka Isbaanishka)
Taariikhda IB HL
Koorso: # IB200, Sannadka 1aad, S1
Koorso: # IB202, Sannadka 1, S2
Koorso: # IB204, Sannadka 2, S1
Koorso: # IB206, Sannadka 2, S2
Heerarka: 2.0 (koorso laba sano ah)
Shuruudaha: Taariikhda AP ee Mareykanka, Taariikhda Mareykanka ee Casriga ah, Daraasaadka Mareykanka 10 Maamuus
Koorsadani waa hordhac laba sano ah oo taariikhda adduunka ee casriga ah. Koorsada kowaad waxay ka bilaabaneysaa cutubyo ay ka mid yihiin Kacaankii Warshadaha ee Ingiriiska, Yurub, iyo Japan iyo sidoo kale daraasad ku saabsan Imperial Russia, kacaanno iyo soo bixitaankii Dowladdii Soofiyeeti.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Taariikhda IB HL
IB Luqadda iyo Suugaanta HL, Luqadda A (Isbayniska Isbaanishka)
Koorso: # IM220, S1
Koorso: # IM221, S2
Fasalada (yada) la bixiyo: 12
Shuruudaha: IB Luqadda iyo Suugaanta SL Sannadka 1aad, Luqadda A - Isbayniska Isbaanishka
Koorsada IB HL, ardaydu waxay baran doonaan qoraallo dheeri ah iyo mowduucyo ku saabsan luuqadda Isbaanishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Luqadda iyo Suugaanta HL, Luqadda A (Isbaynta Isbaanishka)
IB Luqadda iyo Suugaanta SL, Luqadda A (Imtixaanka Shiinaha)
Koorso: # IM116, Sannadka 1, S1
Koorso: # IM117, Sannadka 1, S2
Koorso: # IM118, Sannadka 2, S1
Koorso: # IM119, Sannadka 2, S2
Fasalada (yada) la bixiyo: 11 (sanadka 1); 12 (sanadka 2)
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh ku dhammaystiridda Imbarashada Shiinaha Luqadda AP iyo Dhaqanka iyo Sharafta Aadamiga Shiinaha
Koorsadan oo labo sano socotaa waxay meteleysa qaab cusub oo loo fiirinayo luuqadda Shiinaha, iyadoo la baarayo sida uu luqaddu ugu horumarto arrimo dhaqameedyo gaar ah iyo sida ay adduunka u saameyso
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Luqadda IB iyo Suugaanta SL, Luqadda A (Immersion-ka Shiinaha)
IB Luqadda iyo Suugaanta SL, Luqadda A (Isbayniska Isbaanishka)
Koorso: # IM216, Sannadka 1, S1
Koorso: # IM217, Sannadka 1, S2
Koorso: # IM218, Sannadka 2, S1
Koorso: # IM219, Sannadka 2, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh ku dhammaystira Isbaanishka Luuqadda iyo Dhaqanka Isbaanishka iyo Xuquuqda Aadamiga Isbaanishka
Koorsadani waxay u taagan tahay qaab cusub oo lagu fiiriyo luuqadda Isbaanishka, iyadoo la baarayo sida luuqaddu ugu horumarto duruufaha gaarka ah ee dhaqamada iyo sida ay adduunka u saameyso.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Luqadda iyo Suugaanta SL, Luqadda A (Isbaynta Isbaanishka)
IB Cilmu-nafsiga SL
Koorso: # IB208, S1
Koorso: # IB210, S2
Cilmu-nafsiga IB wuxuu baaraa isdhexgalka saamaynta bayoolojiga, garashada iyo dhaqanka bulshada ee dhaqanka aadanaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Psychology SL
Hordhaca Siyaasadda Shiinaha
Koorso: # IM160
Koorsadan Shiinaha lagu baranayo, ardaydu waxay baran doonaan oo ay falanqeyn doonaan arrimaha siyaasadeed ee hadda ka jira Shiinaha, waxayna soo jeedin doonaan xalal siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hordhaca Siyaasadda Shiinaha
Hordhaca Siyaasada Latin America
Koorso: # IM260
Koorsadani waa hordhac u ah siyaasadda Latin America, oo diiradda saareysa halganka dimuqraadiyadda, hay'adaha matala, iyo horumarka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hordhaca Siyaasadda Latin America
Farshaxanka Luuqada 9 (Bilowga Shiinaha)
Koorso: # IM100, S1
Koorso: # IM102, S2
Koorsadani waxay sahmin doontaa mowduucyo kala duwan waxayna ardayda u diyaarin doontaa inay ku guuleystaan koorsada AP Luqadda iyo Dhaqanka sanadka soo socda.
Akhri Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Farshaxanka Luuqadda 9 (Imtixaanka Shiinaha)
Farshaxanka Luuqada 9 (Isbaanishka Isbarashada)
Koorso: # IM200, S1
Koorso: # IM202, S2
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Farshaxanka Luqadda 9 (Isbayn Isbaanish)
Barnaamijka Bilowga ee MHS Dibadda - Chile Travel
Koorso: # IM280W, jiilaal
Heerarka: .5 (koorsada semester-ka labaad, safarka xagaaga dibedda)
Shuruudaha: K-10 Isbaanishka Immersion
Daraasad dibedda ah oo ku taal Chile oo loogu talagalay ardayda Isbaanishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Bilowga ee MHS Dibadda - Chile Trip
Mabaadi'da Dowladda Mareykanka iyo Siyaasadda (Tonka Online)
Koorso: T2099W, Tonka Online (W = jiilaal)
Shuruudaha looga baahan yahay: Latalinta latalinta. ogolaansho kaliya
Koorsadan khadka tooska ah waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha ardayda raadinaya dhibco dhammaystirka dowladda Mareykanka iyo heerarka siyaasadeed ee looga baahan yahay qalin-jabinta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan mabaadi'da Dowladda Mareykanka iyo Siyaasadda (Tonka Online)
Cilmi nafsiga *
Koorso: # 2018
* Koorsadani ma buuxinayso dhibcahaaga 3.5 ee cilmiga bulshada laakiin waxaa loo qaadan karaa xulasho marka lagu daro shaqadaada koorso ee loo baahan yahay.
Cilmu-nafsiga waa barashada hab-dhaqanka iyo habka maskaxda. Mawduucyada waxaa ka mid ah saameynta / xakamaynta maskaxda ee hawl maalmeedka, hurdada iyo riyada, horumarka aadanaha, barashada iyo fakarka, cilladaha nafsiga ah, cilaaqaadka, iyo saamaynta goobaha bulshada ee dhaqanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cilmu-nafsiga *
Koorso: # 2020
* Koorsadani ma buuxineyso dhibcahaaga 3.5 ee cilmiga bulshada laakiin waxaa loo qaadan karaa xulasho marka lagu daro shaqadaada koorsada ee loo baahan yahay.
Sociology waa barashada aadanaha iyo habdhaqankooda koox koox. Akhrinta, cilmi baarista shaqsiga, kuhadlayaasha, doodaha, iyo bandhigyada maqalka, ardayda waxay baran doonaan dhaqanka, isbedelka, xiriirka, bulshada, iyo abaabulka bulshada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cilmiga bulshada *
Filimka Isbaanishka iyo Dhaqanka
Koorso: # IM240
Koorsadani waxay ardayda ka caawin doontaa inay sii horumariyaan xirfadahooda luqadeed iyagoo baranaya, daawanaya iyo falanqeynaya filimada ka socda adduunka ku hadla Isbaanishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Filimka Isbaanishka iyo Dhaqanka
Filimka Isbaanishka iyo Dhaqanka (Tonka Online)
Shuruudaha looga baahan yahay: Isqorista K-8 ee Isbayn Isbaanish ah
Koorsadan Tonka Online waxay ka caawin doontaa ardayda inay sii horumariyaan xirfadahooda luqadeed iyagoo baranaya, daawanaya iyo falanqeynaya filimada adduunka ku hadla Isbaanishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Filimka Isbaanishka iyo Dhaqanka (Tonka Online)
Koorso: # 2012, S1
Koorso: # 2014, S2
Xulashada Khadka Tooska ah : T2012F, qeybta 1aad, Tonka Online
Xulashada Khadka Tooska ah : T2014W, qeybta 2aad, Tonka Online
Fasalada (yada) la bixiyo: 11
Shuruudaha: Taariikhda Mareykanka ee casriga ah; AP Taariikhda Mareykanka; Daraasadaha Mareykanka 10 Maamuus
Koorsadani waxay xoogga saareysaa mawduucyada taariikhiga ah iyo juqraafi ahaaneed ee adduunka laga bilaabo Ilbaxnimooyinkii Hore iyada oo loo marayo Dunida Casriga ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Taariikhda Adduunka
VANTAGE waa barnaamijka waxbarasho xirfadeed ee sare ee Minnetonka High School. Iyada oo loo marayo barashada khibrada leh, VANTAGE waxay siisaa fursad qaas ah ardayda si ay ugu dabaqaan shaqadooda koorsada goobaha dhabta ah ee dunida.
Ku xiro xiisahaaga barashada bulshada fursadaha xirfadeed ee mustaqbalka adoo qaadanaya koorso VANTAGE ah:
Ka baaraandeg shaqooyinka xagga aragtida caalamiga ah, barashada fikradaha aasaasiga ah ee dhaqaalaha iyo cilmi baarista hababka ugu fiican ee farsamooyinka qancinta, ka hadalka dadweynaha iyo isgaarsiinta wax ku oolka ah. Sannadkan oo dhan, saddexda deyn-raadinta waxaa ka mid ah AP Seminar (hal deyn oo Ingiriis ah), IB Business Management SL ama HL (hal deyn ganacsi oo la doorto) iyo AP Microeconomics (hal daraasad oo cilmiga bulshada ah).
Baro deegaanka iyo dhaqaalaha adduunka adoo adeegsanaya muraayadaha indhaha, cilmiga nafleyda iyo cilmiga macluumaadka. Laga soo bilaabo joogtaynta shirkadaha, sayniska cuntada, sugnaanta cuntada, iyo badbaadada cuntada ee nidaamyada biyaha, nidaamyada qashinka ilaalinta tamarta iyo inbadan, ka qaybgal khibradaha dhabta ah ee adduunka ee dhinacyada la xiriira joogtaynta adduunka. Sannadkan oo dhan, laba-deyn raad ah waxaa ka mid ah Daraasaadka Caalamiga ah iyo Dhaqaalaha (mid ka mid ah amaahda cilmiga bulshada) iyo AP Environmental Science (hal deyn oo saynis ah oo la doorto).
Baadh qaybaha cilmiga caafimaadka oo kobciya fahamka cilmu-nafsiga iyo nidaamka aadanaha, oo ay ku jiraan aragtida guud ee xirfadaha badan ee laga heli karo xirfadle daryeel caafimaad oo mustaqbalka ah. Sannadkan oo dhan, 2.25-credit track waxaa ka mid ah AP Psychology (hal deyn oo cilmiga bulshada ah), Baadhitaanka Aadanaha (hal sumcad sayniska xulashada), Sayniska Caafimaadka (.25 amaahda sayniska xulashada) iyo fursadda lagu kasbado shahaado ahaan kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan ama xaalad degdeg ah jawaab bixiye caafimaad.
Siyaasadda Dadweynaha - CUSUB 2021-22!
Baadh aduunyada xirfadeed ee dejinta siyaasada guud, oo ay kujiraan dawlada, gobolka, iyo dawlada hoose; xiriirka dadweynaha, ururada danta guud, ururada u dooda arrimaha, xisbiyada siyaasada, iyo inbadan. Sannadkan oo dhan, laba-deyn raadraac ah waxaa ka mid ah AP Seminar (hal deyn oo Ingiriis ah) iyo CIS (Kuleejka Dugsiyada) Dimoqraadiyadda Mareykanka ee Dunida Beddelaysa (hal dhibic oo cilmiga bulshada ah). Waxaad sidoo kale kasban doontaa dhibcaha 4 ee Jaamacadda Minnesota barnaamijka CIS (Kulliyadda Dugsiyada).
WAX BADAN KA BARO KOORSOOYINKA GUUD